Cod-faroole oo kahadlay shirarka doorashooyinka soomaaliya iyo arrimo kale. – Acute Lymphoblastic Leukemia
Cod-faroole oo kahadlay shirarka doorashooyinka soomaaliya iyo arrimo kale.
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faraale oo saaka xilli hore shir jaraa’id ku qabtay guriga uu ka deganyahay magaalada Garoowe ayaa kahadlay shirarka looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya ee kasocda qaar kamid ah magaalooyinka wadanka.
Dr Faroole ayaa shirkiisa jaraa’id kaga hadlay dastuurka wadanka Soomaaliya ee looga baxay kumeel gaarka, gaar ahaa shirkii Garoowe labo, nooca doorasho ee kadhici kadha wadanka, baraarujinta dadka ka qaybgelaya shirarka, faragelinta dowladda federalka ah, beesha caalamka iyo ujeedkeeda Soomaaliya iyo arrimo kale.
Ugu horayn Faroole ayaa sheegay inay wanagasnayd in shirka kahor dadka lasiiyo wacyigelin iyo inay kasii tashtaan fekerkooda ama ay bulshada ay matalayaan ee gobolkaasi afkaartooda soo dhegeystaan, maadaama uu dastuurku qabo in dadka Soomaaliyeed la ogaysiiyo waxa ay dowladdu qorshaynayso.
Madaxweynihii hore ee Puntland wuxuu sheegay in dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay doonayso inay meelmariso qorshe ay xilka dib ugu soo laaban karaan xubnaha xilligaan talada haya sida nidaamkii laga gudbey ee 4.5 ama mid xisbi ah oo doorashada lakal dhantaalayo.
Dhanka kalena madaxweynihii hore ee Puntland ayaa ugu baaqay dadka ka qaybgelaya shirarka kasocda guud ahaan Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka inay dhiibtaan fekrad ay u madax banaan yihiin oo aan ahayn mid ay wadato dowladda dhexe ama madaxda maamulada xubnaha ka ah Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed ayaa ugu baaqay ka qaybgalayaasha shirarka inay doortaan qaabka doorashadu ku imaan kadho ee ah nidaamka deegaamaysiga oo uu sheegay inuu yahay wadada kaliya ee looga bixi karo qabyaaladda uu dalka ku celiyey nidaamkii hore ee 4.5.
Ugu dambayntiina Faroole ayaa sheegay inay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniib ah oo dhaqaale soo qaatay aana doonayn marna xasiloonida Soomaaliya iyo in umadda Soomaaliyeed ay ka baxdo dhibaatada, Wuxuuna tusaale u soo qaatay arrimaha gobolada dhexe ee Soomaaliya.